Webhusaiti Dhizaini 2022 - AudienceGain
Basic Webhusaiti Dhizaini
WEBSIGN DESIGN COMPANY
AudienceGain ikambani ine mukurumbira uye ine mukurumbira webhusaiti dhizaini inoshanda mukupa yakachipa nyanzvi yekugadzira webhusaiti masevhisi, SEO zviyero uye nhare inoenderana. Iyo kambani ine yakasimba IT timu, yekusika kufunga, makore mazhinji echiitiko mumunda weruzivo tekinoroji. AudienceGain inogara ichiteerera uye inonzwisisa kuomerwa kwemutengi wega wega, kubva iyo kambani ichapa mhinduro dzakanyanya kubatsira vatengi kuvimbiswa zvakakwana zvemhando pamutengo wakachipa.
Chii chinonzi Webhusaiti Dhizaini?
Magadzirirwo ewebhusaiti musanganiswa webasa kubva pakugadzirwa kwemifananidzo, zvirimo uye kuratidza interface yewebhusaiti kuisa ruzivo rwemifananidzo yevanhu, masangano nemabhizinesi painternet uye kuwana mari yakawanda. kuburikidza nekuwana vangangove vatengi paInternet neWebhusaiti.
Webhusaiti ndiyo mufananidzo, mhando, uye chiso chebhizinesi paInternet, saka kuvaka webhusaiti ibasa rakakosha kune munhu kana bhizinesi kuwedzera mhando yavo uye kutsigira kutengesa kwepamhepo.
Benefits yewebhu dhizaini
Munguva yetekinoroji 4.0, kusava newebhusaiti kuchaita kuti zviome kukambani yako kana bhizinesi kukwikwidza nevamwe vakwikwidzi. Kunyanya kana mamiriro edenda anetsa, kutenga online kwave kuita zvakanyanya kupfuura nakare kose. Kuve newebhusaiti yebhizinesi rako repamhepo inzira isingadzivisike yebhizinesi rako.
Professional webhusaiti dhizaini sevhisi ndeyekubatsira vatengi kupa maonero ehunyanzvi hwekushanda maitiro ekambani, chitoro, bhizinesi, nekuwedzera, vashandisi vane fungidziro kubva panguva yekutanga pavanoshanyira webhusaiti yebhizinesi.
Kupa mhando dzeWordPress themes mune akasiyana maindasitiri, nyore kuisa, SEO yakajairwa dhizaini, inoenderana nemidziyo yese.
PASI POSE SEO
Nyanzvi dzemhando SEO masevhisi, AudienceGain ikambani inotungamira inopa webhusaiti SEO masevhisi kumabhizinesi.
Kukubatsira kuchengetedza nguva uye kushanda nesimba kutarisira webhusaiti yako, kugadzirisa zvemukati kana kugadzirisa zvakakosha. Chaunofanira kuita kuvimba nesu
Simbisa Google PageSpeed ​​​​Insights kumhanya. Ishandise kumhanyisa yako WordPress saiti, kuvandudza SEO masosi, uye kuderedza Google Ads mabhedhi.
SEO Entity uye Social Kuvaka masevhisi anokubatsira iwe kuwedzera kuvimba kune yako webhusaiti uye kusimudzira keyword masanjiro nekukurumidza uye zvakachengeteka.
HOSTING / VPS CHEAP CONFIGURATION
Kupa Hosting, Unlimited VPS, yepamusoro mhando neSSD drive, kukurumidza kuwana data kugadzira nzvimbo yekukwirisa yako Webhusaiti.
Professional Webhusaiti Dhizaini sevhisi mapakeji
Isu tinopa webhu dhizaini mapakeji pamitengo yemakwikwi pamusika.
Dhizaina zvinoenderana netemplate muchitoro chekushandisa
Free domain name .com .net
SSL Chengetedzo: Hongu
Yemahara Hosting ine huwandu hwepamusoro
Mutauro: 1 Mutauro
Yakabatanidzwa online chat
Ipa 5 zvinyorwa - 10 zvigadzirwa
Yemahara dhizaini yemabhana maviri epasuru yemadhora mazana maviri
Kupa iyo source code
Inopindura: Ratidza PC / Tablet / Runhare
Yemahara Marketing Consulting
Warranty: Nokusingaperi Kana Uchishandisa AudienceGain Hosting
Dhizaina zvinoenderana netemplate inotsigira kugadzirisa
Free domain name .com .com.vn
Mitauro: 2 Mitauro
Ipa 8 zvinyorwa - 20 zvigadzirwa
Ipa 3 Banner magadzirirwo
Exclusive dhizaini pakukumbira
Free domain name .vn .com.vn
Ipa 10 zvinyorwa - 30 zvigadzirwa
Ipa 4 Banner magadzirirwo
KUSHANDA MAITIRO YEAUDIENCEGAIN WEB DESIGN COMPANY
AUDIENCEGAIN inogara ichigonesa maitiro zuva nezuva kuti basa rifambe zvakanaka kuchengetedza mutengo wevatengi zvakanyanya sezvinobvira. Isu tinopa webhu dhizaini masevhisi pasi rese.
Gamuchira zvikumbiro uye kurudzira vatengi
Tsvaga chinangwa chemutengi paunenge uchigadzira webhusaiti, tumira referensi yemuenzaniso interface uye raira iyo yakakodzera interface.
Vhara iyo webhu interface, quote uye tumira chibvumirano
Mushure mekunge mutengi abvumirana neiyo interface template, wobva watora uye tumira kondirakiti kumutengi kuti itariswe.
Saina kondirakiti yekugamuchira 50% yepamberi kubva kune vatengi
Mapato maviri aya anobvumirana nemitemo yekontrakiti, pfuurira kusaina uye kugamuchira 50% yemari yekuvandudza webhu kubva kumutengi.
Ita kuvandudzwa kwewebhu pasi pechibvumirano
Gadzira webhusaiti zvinoenderana nekontrakiti yenguva uye ratidza zvabuda zvinoenderana nekufambira mberi kwewebhu. Edza & tumira mhinduro yekupedzisira.
Kubvuma bvunzo uye mirairo yekuti ungashandise sei webhusaiti
Gamuchira mhinduro kubva kune vatengi, kugadzirisa kwakazara uye kugamuchirwa. Mirayiridzo yekushandisa webhusaiti.
Warranty uye webhusaiti yekuchengetedza panguva yekushandiswa kwesevhisi
Warranty - kutarisirwa - kwekutanga kugadzirisa kune vatengi kana vakazvipira kune-kureba yekutambira.
Webhusaiti interface templates neindasitiri
Kutengesa WordPress Theme
Bhizinesi WordPress Theme
Kufamba - Hotera WordPress Theme
Dzidzo WordPress Theme
Cosmetics - Runako WordPress Theme
WordPress Theme Interior - Architecture
Fashoni WordPress Theme
Chikafu - Mushonga WordPress Theme
WordPress Theme Nhau
MIBVUNZO NEZVESE WEBSITE DESIGN SERVICES
Zvinotora nguva yakareba sei kuti upedze dhizaini yewebhusaiti paAudienceGain?
Magadzirirwo ewebhusaiti kusvika pakupedzwa kazhinji anotora mazuva gumi nemashanu kusvika makumi matatu zvichienderana nehukuru, huwandu hwemitauro uye kuoma kwechigadzirwa.
Yakareba sei nguva yewaranti kana uchishandisa AudienceGain's webhusaiti dhizaini sevhisi?
Webhusaiti waranti sevhisi ine nguva ye01 gore kubva pazuva rekupihwa webhusaiti. Kukura kwewaranti kunosanganisira kugadziriswa kwezvikanganiso zvewebhusaiti kana paine zvikanganiso zvichienzaniswa nemaitiro ekugadzira, zvikanganiso zvinomuka panguva yekushandiswa, uye kuchengetedzwa kwewebhusaiti.
Ko AudienceGain webhusaiti dhizaini ine invoice & kondirakiti?
Nyaya iri kufarirwa nemayuniti mazhinji ndeye kana iyo webhusaiti dhizaini sevhisi iri invoice. Chikonzero chekugadzirwa kwewebhusaiti chiri pane rondedzero yesoftware masevhisi asiri pasi peVAT, saka nyaya yemainvoice kune vatengi haibvumidzwe kubvisa zvakabuda kumabhizinesi. Uye AudienceGain inogona kusimbisa kuti, pakugadzira webhusaiti kana kushandisa mamwe masevhisi ewebhusaiti, vatengi vanopihwa VAT invoice uye zvibvumirano.
Ini ndinogona kushandura iyo nyowani interface panguva yekushandisa? Pane rutsigiro rwekugadzirisa kana kuwedzera kushanda?
Panguva yekushandiswa, kana iwe uchida kushandura iyo interface kana kugadzirisa mamwe mabasa, AudienceGain inotsigira nemutengo wakanakisa.
Nezviitiko zvese, kuzvipira uye hunyanzvi, AudienceGain ine chivimbo inopa mabhizinesi mhinduro yakanakisa yekugadzira webhusaiti webhusaiti deisgn.
© 2016-2022 AudienceGain - Solution Yevagadziri Vemukati